Iwo mabhegi eweti eVogt Medical anowanikwa mune akasiyana magadzirirwo, kuitira kubvumira mushandisi wega wega kusarudza bhegi chairo rechiratidzo chakakodzera. Izvo zvakanakira zviri pachena: wepasirose chinobatanidza, yakapusa drainage uye vharuvhu yekudonha, iyo inodzivirira iyo reflux yemuti weti mudundira uye inonyatso kudzivirira hutachiona hunokwira.
Weti mabhegi anoshandiswa kuunganidza weti yakanyoroveswa kuburikidza neiyo weti catheter
Weti mabhegi akagadzirwa nechisungo
Iyo yekubatanidza ino chengetedza yakachengeteka kunamatira kune weti catheter
Iyo inochinjika, kink-inomiririra drainage chubhu inogonesa kuiswa kwakachengeteka kweiyo weti bhegi
Yakasimudzwa yekumisikidza slots zvakare inogonesa iyo weti bhegi kuti ichengetedzwe yakatwasuka
Yakagadzirwa kubva pane yakajeka zvinhu zvekuvandudza kuongorora
Heparin cap (jekiseni chimiso), webetsero yekurapa chiridzwa, inowanzo shandiswa senge jekiseni nzira uye jekiseni chiteshi, inogamuchirwa zvakanyanya uye inogamuchirwa nemasangano ekurapa. Heparin cap yakajairika kwazvo mumorden medical line, inoita basa rakakosha kwazvo kana ikashandiswa pamwechete ne IV cannula uye yepakati venous catheter. Heparin cap ine zvakwakanakira zvakasiyana senge: kuchengetedzeka, utsanana, kusimba kwakasimba, kuiswa chisimbiso kwakanaka, vhoriyamu diki, kushandiswa kwakaringana, mutengo wakaderera, chakanakira mukana kusunungura marwadzo / kukuvara kwevarwere apo jekiseni uye infusion.
Huaian Medicom inogadzira heparin cap kwenguva yakareba uye inopa OEM sevhisi kune dzakawanda nyika senge TURKEY, PAKISTAN, POLAND, FRANCE, MALAYSIA ECT
Inoshandiswa pamwe chete neanopa uye ine venous cannula.
Kuiswa kweHeparin-Sodium kunogona kudzivirira kuwanda kweropa kugwamba.
Yakagadzirwa kubva kugiredhi rezvekurapa PVC, International luer chinongedzo, chakanakisa pane bio-inoenderana.
Yaive yakasimba-inokodzera adapta, ine yakanaka ficha yechisimbiso, iyo inotungamira kune kusabvu.
Yakatsetseka chaizvo uye yakapfava kubaya, isina chero micheto uye makona
Combi chimiso (Combi-chimiso chekuvhara makoni) Inoshandiswa kune inoraswa sirinji; Iine hunyoro uye inoratidzika kutaridzika; Kuvhara makoni, Luer Lock inokodzera murume nemukadzi
Yakagadzirwa kubva pakurapa giredhi PC kana ABS, International luer chinongedzo, chakanakisa pane bio-inoenderana
Yaive yakasimba-inokodzera adapta, ine yakanaka ficha yechisimbiso, iyo inotungamira kune kusabvu
Luer kukiya inokodzera murume nemukadzi
Hapana kemikari yekuwedzera pakati pezvinhu, kuti udzikise kukurudzira
Iyo chishandiso inogona kushandiswa kune vese varwere avo vanorayirwa infusion kurapwa. Hapana murume kana murume zvine chekuita nezera. Combi-Stoppers inogona kushandiswa kune vanhu vakuru, vana uye neonates.
Iyo intravenous (IV) cannula iri diki kwazvo, inochinjika chubhu inoiswa mune imwe yetsinga dzako, kazhinji kuseri kweruoko rwako kana ruoko rwako. Mumwe mugumo unogara mukati medu mutsinga uye mumwe mugumo une vharuvhu diki inotaridzika kunge pombi.
Kune matatu matatu akakosha akasiyana ezvinosvika kune ivs, uye iwo ari Peripheral IVs, Central Venous Catheters, uye Midline Catheters. Vashandi vezvehutano kune izvi vanoedza nekupa yega uye yega yega mhando yeiv yekurapa kwakasiyana uye zvinangwa.
US Centers for Disease Control nhungamiro inokurudzira kutsiva kweanopinza intravenous catheters (PIVC) kwete kazhinji kupfuura maawa 72 kusvika 96 ese. Kugara uchitsiva kunofungidzirwa kudzikisa njodzi ye phlebitis uye hutachiona hwehutachiona.
Nhatu Nzira Stopcock
Inoshandiswa kumisikidzwa panguva imwe chete uye kuenderera kwemvura mbiri kuti ubatanidze
standard 6% luer chishandiso uye nekudzora kuyerera nzira.
Batanidza stopcock ine shoma-yakafa nzvimbo yekuona manejimendi ekushandisa zvinodhaka
360 degree yakatsetseka pombi kutenderera, kudonhedza humbowo kusvika kumashanu mabhawa kumanikidza uye inogona kumira kumanikidza kunoiswa mune zvakajairika maitiro.
Imwe yemurume luer kukiya ine rotator uye maviri akasungwa echikadzi emachiteshi anobatsira akachengeteka & akachengeteka kubatana.
Kubvisa Catheters neCardinal Health kunoratidzira vharuvhu inonongedza iyo inoderedza mikana yeanosvipa sputum kudzikisira kushungurudzika. Iyo ergonomically chaiyo angle yevhavha inowedzera nyaradzo uye iyo DeLee tip inoderedza marwadzo uye mukana wekukuvara. Iyo yekubvisa Catheter yakasimba zvakakwana kuti iiswe nyore uye kubviswa, asi inochinjika zvakakwana kuti igone kunyatsoshanda. Mavara mavharuvhu anobatsira kuona akasiyana masizi eFrance eSuction Catheters.
Tracheal suction catheter chimbo chekurapa chinobatsira pakuburitsa zvakavanzika semate kana mamasi kubva kumusoro kwepamhepo. Mumwe mugumo wekateti wakasungirirwa zvakachengeteka kune yekuunganidza canister kana yekukweva muchina. Iwo wekupedzisira unoiswa wakananga mutiraki chubhu yekubvisa zvakavanzika.
Suction catheter inoshandiswa kuyamwa sputum uye kusevha mune yekufema turakiti.
Iyo catheter inoshandiswa nekuisirwa zvakananga muhuro kana neyakaiswa tracheal chubhu yeanesthesia
Pombi yekudyisa chishandiso chekurapa chinoshandiswa kupa chikafu kune vanhu vasingakwanise kuwana chikafu nemuromo, vasingakwanise kumedza zvakachengeteka, kana kuda kuwedzerwa kwehutano. Mamiriro ekupihwa chikafu nehubhu yekudyisa inonzi gavage, enteral feed kana tube kudyisa. Kuiswa kunogona kuve kwenguva pfupi kwekurapwa kwemamiriro akaomarara kana kwehupenyu hwese mune yekuremara kusingaperi. Mhando dzakasiyana dzekupa machubhu dzinoshandiswa mukurapa. Ivo vanowanzo gadzirwa ne polyurethane kana silicone. Iyo dhayamita yeyekupa chubhu inoyerwa muzvikamu zveFrance (yega yega French unit yakaenzana ⅓ mm). Ivo vanosarudzika nenzvimbo yekuisirwa uye yakashandiswa kushandiswa.
Iyo gastrostomy yekudyisa chubhu kupinza ndiko kuiswa kweyekupa chubhu kuburikidza neganda uye nemudumbu madziro. Inopinda yakananga mudumbu. Dumbu rinobatanidza svinga uye ura hudiki, uye rinoshanda sedura rakakosha rekudya, risati rasvitswa kuura hudiki.
Nelaton uye urethral catheters anoshandiswa kukamura catheterization uye akasiyana zvakanyanya kune asingagumi mukugara catheters uye ekunze catheters. Izvi zvinoitirwa kwenguva pfupi dundira catheterization. Catheterization inopindirana inzira iyo iyo catheter inopinzwa mukadhibhodhi yeiyo drainage weti uye ipapo inobviswa ipapo. Iyo catheter chubhu inowanzo pfuura nemu urethra. Weti inodururwa muchimbuzi, bhegi kana weti. Kuzvidzora wega urethral catheterization kwakajairika, zvisinei, chisarudzo chekiriniki chakaitwa nachiremba wako. Catheterization inopindirana inogona kuitwa zvese munguva pfupi uye kwenguva refu. Njodzi dzinosanganisirwa necatheterization yepakati nepakati dzinosanganisira hutachiona hwehutachiona (UTI), kukuvara kwetsinga, kugadzirwa kwemanyepo uye kuumbwa kwematombo edundira mune dzimwe nguva. Makateti epakati anopa rusununguko kubva kuunganidzwa zvishongedzo unova iwo mukana wavo mukuru uye unowanzo kurudzirwa kune avo vane chirwere cheuropathiki (chisina kurongeka uye chisina kujairika dundira basa).
Nelaton catheters anoshandiswa muzvipatara akatwasuka chubhu - kunge macatheters ane rimwe gomba parutivi petipi uye chinongedzo kune kumwe kunopera kwemvura. Nelaton catheters anogadzirwa kubva pakurapa giredhi PVC. Izvo zvinowanzoomarara kana kuomarara kuti zvibatsire kupinza mune iyo urethra. Male nelaton catheters akareba kupfuura echikadzi catheters; zvisinei, machathet evarume anogona kushandiswa nevarwere vechikadzi. Izvi zvinodaro nekuti iyo urethra yechikadzi ipfupi pane yemurume urethra.Nelaton catheters inoitirwa kushandiswa kamwechete uye inofanirwa kushandiswa chete kune inopindirana catheterization.
anoshandiswa epakatikati catheterization uye akasiyana zvakanyanya kune asingagumi mukugara catheters uye ekunze catheters. Izvi zvinoitirwa kwenguva pfupi dundira catheterization. Catheterization inopindirana inzira iyo iyo catheter inopinzwa mukadhibhodhi yeiyo drainage weti uye ipapo inobviswa ipapo. Iyo catheter chubhu inowanzo pfuura nemu urethra. Weti inodururwa muchimbuzi, bhegi kana weti. Kuzvidzora wega urethral catheterization kwakajairika, zvisinei, chisarudzo chekiriniki chakaitwa nachiremba wako. Catheterization inopindirana inogona kuitwa zvese munguva pfupi uye kwenguva refu. Njodzi dzinosanganisirwa necatheterization yepakati nepakati dzinosanganisira hutachiona hwehutachiona (UTI), kukuvara kwetsinga, kugadzirwa kwemanyepo uye kuumbwa kwematombo edundira mune dzimwe nguva. Makateti epakati anopa rusununguko kubva kuunganidzwa zvishongedzo unova iwo mukana wavo mukuru uye unowanzo kurudzirwa kune avo vane chirwere cheuropathiki (chisina kurongeka uye chisina kujairika dundira basa).
Chiremba yekuwedzera chubhu yakakodzera yekubatanidza nemamwe ekumisikidza michina, zvinoenderana nezvinodiwa chaizvo zvehurefu hwakasiyana, inogona kushandiswa zvakanyanya mukumanikidza kuongorora uye infusion kurapwa.
Chiremba yekuwedzera chubhu haina kuchena uye yakagadzirwa nePV. Inosanganisira inochinjika uye kink-isingamiriri chubhu inowanikwa muhurefu hwakasiyana, yechirume kana yechikadzi luer chinongedzo pamwe neiyo luer lock koni yekuvimbisa yakachengeteka kubatana kweinobva infusion uye murwere. Iyo inogona kumira kumanikidza inosvika ku4 bhawa uye nekudaro yakasarudzika kuti ishandiswe kumagetsi anodyiswa infusions chete. Zvakare inowanikwa seyokurapa yekuwedzera chubhu ine kumanikidza kuramba kweanosvika makumi mashanu neshanu bar uye yakatarwa kuti ishandiswe mukubatanidzwa nemapombi ekupompa
Male luer kukiya chinobatanidza pane imwe mugumo uye mukadzi luer kukiya chinobatanidza kune rimwe divi
Bhaluni rectal chubhu (rectal catheter). Maitiro echinyakare, uye munzvimbo yanhasi yetekinoroji isina kuchengetedzeka, iko kushandiswa kweiyo rectal cath Rectal machubhu anogona kunge akachengetedzeka uye zvinobudirira kushandiswa kudzivirira kuvhuvhuta muvarwere vanorwara vane manyoka. Iko kushandiswa kwema rectal machubhu sead ad juncts kurapa uye kudzivirira kumanikidza maronda mukutsoropodza varwere vanorwara kunokodzera kuenderera mberi kudzidza. Idzi dzimba dzekugara dzinogara (makumi maviri kusvika makumi matatu echiFrench) dzakabatana nebhegi remubhedha remubhedha,
Yakapfava uye kink inodzivirira PVC chubhu, inotsvedzerera yekunze nzvimbo, isina kurwadziwa zvishoma; Maziso maviri ekupedzisira ane mitsara yakatsetseka
Rectal machubhu uye maketeti anoiswa mukati meye rectum kuendesa yakasununguka chituru muhomwe yekuunganidza. Bhaluni riri padhuze nepakuchengeterwa catheter (mukati memuviri) rinogona kufufutirwa kana catheter yave munzvimbo yekudzivirira kuburitsa chituru chakakomberedza catheter uye kudzivirira iyo chubhu kuti isabude panguva yekufamba kwemudumbu.
Pachivanhu, rectal chubhu inoiswa nerubatsiro rweyakaomarara sigmoidoscope kuti uwane kudzikisira kwesigmoid volvulus uye kudzikamisa kudzoka kwenguva pfupi. Flexible sigmoidoscopy inogona kunge iri nzira yakachengeteka yekuzadzisa kudzvinyirira, uye zvakare inobvumidza kuona kwakananga kwemucosa kubvisa ischaemia.
Yankauer set inoshandiswa kukweva oropharyngeal secretions kuitira kudzivirira kuda. Yankauer inogona zvakare kushandiswa kujekesa nzvimbo dzekuvhiya panguva dzekuvhiya uye vhoriyamu yakakwezvwa inoonekwa sekurasikirwa neropa panguva yekuvhiyiwa.
Iyo Yankauer suction tip (yakanzi yang´kow-er) chishandiso chekukweva nemuromo chinoshandiswa mune zvekurapa maitiro. Inowanzo simbisa yakasimba yekukweva chipurasitiki ine yakavhurwa hombe yakakomberedzwa nemusoro une bulbous uye yakagadzirirwa kubvumira kunwa kwakanaka pasina kukuvadza maturusi akapoterera.
Ichi chishandiso chinoshandiswa kukweva oropharyngeal secretions kuitira kudzivirira aspiration. Yankauer inogona zvakare kushandiswa kujekesa nzvimbo dzekuvhiya panguva dzekuvhiya uye vhoriyamu yakakwezvwa inoonekwa sekurasikirwa neropa panguva yekuvhiyiwa.
Yakagadziridzwa kwakatenderedza 1907 neAmerican palaeontologist Sidney Yankauer (1872-1932), iyo Yankauer suction chiridzwa chave chinowanzozivikanwa kurapwa kukanda chiridzwa munyika.
Doro Pad, Kuvhiya Nereza Sizes, Iv Catheter, Kubvisa Catheter, Doro Kugadzirira Pad, Mucheche Kudyisa Tube,